Ciise Boqortooyada Ilaahay Buu Dadka Baray | Farriinta Kitaabka
Ciise Boqortooyada Ilaahay Buu Dadka Baray
Ciise xertiisa waxyaalo badan buu baray laakiin hal wax buu muhimmadda saaray taasi waxay ahayd Boqortooyada Ilaahay
MAXAA Ciise dunida loogu soo diray? Isaga qudhiisa baa yiri: “Waa inaan . . . injiilka boqortooyada Ilaah ku wacdiyo, waayo, sidaa darteeda waa la ii soo diray.” (Luukos 4:43) Bal eeg afar wax uu Ciise ka sheegay Boqortooyadaas oo ah waxa ugu muhimsan u baray.
1. Ciise baa loo doortay inuu Boqor noqdo. Ciise si cad buu u sheegay inuu yahay Masiixii la sii sheegay. (Yooxanaa 4:25, 26) Wuxuuna sharxay inuu yahay Boqorkii nebi Daanyeel loo muujiyay. Ciise rasuulladiisii wuxuu ku yiri inuu maalin ku fadhisan doono carshi ammaan leh oo ay iyagana carshiyo ku fadhisan doonaan. (Matayos 19:28) Kuwa maammulka la qaadi doono Ciise wuxuu ku matalay ‘ido yar’ oo aan badnayn. Wuxuuna sheegay inuu lahaa “ido kale” oo kooxdan ka tirsanayn.—Luukos 12:32; Yooxanaa 10:16.
2. Boqortooyada Ilaahay waxay kordhin doontaa caddaalad run ah. Ilaa caasinnimadii ka dhacday beertii Ceeden Shayddaanku cay buu ku cambaareeyay magaca Yehowah Ilaah. Ciise wuxuu ka hadlay inay Boqortooyada baabbiʼin doonto caddaaladdarradan weyn markay magaca Yehowah quduus ka dhigto oo ka masaxdo cay oo dhan. (Matayos 6:9, 10) Maalin walba Ciise wuxuu muujiyay inuusan u kala eexan dadka. Ragga iyo dumarka, taajirka iyo maskiinkaba gebigood isku hab buu wax u baray. Inkastuu muraadkiisa ahaa inuu reer binu Israaʼiil wax baro wuxuu tixgelin siiyay kalmaynta reer Samaariya iyo kuwa Yuhuud ahayn. Diin hoggaamiyayaasha waagaas wuu ka duwanaa oo kala eexasho iyo xaqdarro innaba ma muujin.
3. Boqortooyada Ilaahay ka ma mid aha dunidan. Ciise wuxuu ku noolaa waqti rabsho badan. Dhulkiisii waxaa haystay dowlad shisheeye ah. Haddaba markay dadka isku dayeen inay ka qaybgeliyaan arrimaha siyaasiga ah wuu diiday. (Yooxanaa 6:14, 15) Wuxuu ku yiri nin siyaasi ah: “Boqortooyadaydu tan dunidan ma aha.” (Yooxanaa 18:36) Raacayaashiisana wuxuu ku yiri: “Kuwa dunida ma ihidin.” (Yooxanaa 15:19) Uma uusan oggolaan inay isticmaalaan hubka dagaallada xitaa inay isaga ku difaacaan.—Matayos 26:51, 52.
‘Tuulooyinkuu dhex marayay isagoo dadka ku wacdiyaya oo u sheegaya injiilka boqortooyadii Ilaah.’—Luukos 8:1
4. Maammulka Masiixa jacayl buu ku salaysnaan doonaa. Ciise wuxuu ballanqaaday inuu dadka nasin doono oo culaabtooda u fududeyn doono. (Matayos 11:28-30) Ballantiisa wuu oofiyay. Wuxuu bixiyay talo kalgacayl badan oo waxtar leh sida markuu khudbad ka dhiibayay buurta. Taladan waxay ku saabsanayd dulqaadashada welwelka, wanaajinta xiriirka dadka, farxad helidda iyo ka hortagga maal jacaylka. (Matayos qaybaha 5-7) Dad cayn walba ah baa gartay inuu Ciise qof furan yahay jacaylkuu iyaga u muujiyay daraaddiis. Xitaa kuwa aad loo cadaadiyay baa u qulqulay iyagoo ku kalsoon inuu xushmad iyo raxmad kula dhaqmi doono. Bal maammul fiicanaa Ciise!
Ciise mucjisooyin badan buu sameeyay. Tani waxay ahayd si kale oo awood leh uu dadka wax uga baray Boqortooyada Ilaahay. Aan aragno sababtuu mucjisooyinkan u sameeyay.
Ciise sidee buu u baray dadka inuu ahaa Boqorka Masiixa ah?
Ciise sidee buu u muujiyay inuu caddaaladnimo ku maammuli doono dadka?
Sidee buu Ciise u muujiyay inay Boqortooyadiisu dunidan ka mid ahayn?
Ciise sidee buu u caddeeyay inuu maammulkiisu jacayl ku salaysnaan doono?
Wadaag Wadaag Ciise Boqortooyada Ilaahay Buu Dadka Baray